Kutubta Saxiixul Bukhaari iyo Xisnul Muslim oo laga mamnuucay Dalka… - iftineducation.com
iftineducation.com – Maxkamada sare ee dalka Ruushka ayaa dhawaan soo saartay sharci cusub oo mamnuucaya, kutubta Maraajiicda islaamiga ah iyo kuwa Adkaarta iyo Ducooyinka laga akhristo, gaar ahaan kitaabka Bukhaari Muslimka iyo Kitaabka Xusni Muslimka loo yaqaano.
Sida ay warbaahinta dunidu ku warantay, dawlada Ruushka ayaa shirkada Google ka dalbatay in gabi ahaanba uu joojiyo baahinta, kitaabka xusni muslimka gaar ahaan nuskhadiisa ku turjuman afka Ruushka, waxaana shirkada Google Ruushku ka codsaday in dhamaan bayjajka baahiya kitaabkaas uu meesha ka saaro.
Bishii October ee sanadkii galbaday ee 2014-ka, ayaa Maxkamada sare ee dalka Ruushku soo saartay, liiska kutub ay ku tilmaantay in xag jirnimo ay fidinayaan, waxaana kutubta ay liiska Maxkamada sare ku dartay ka mid ah kitaabka Saxiixul Bukhaariga oo ka mid ah kutubta ugu waaweyn ee Maraajicda u ah diinta Islaamka.
Maxkamada ayaa mamnuucisteedan diiniga ah ku salaysay sababo la xidhiidha ammaanka guud ee qaranka Ruushka.
Laakiin waxa ay taasi layaab ku noqotay dadka Islaamka ah ee dalkaas ku nool oo sadex meelood meel ka mid ahi muslim yahay.
Shirkada google qaybteeda dalka Ruushka ayaa la sheegay in si deg deg ah ay u fulisay go’aanka Maxkamada sare ee Ruushka ka soo baxay, waxaana ay qarisay gabi ahaanba shabakadaha laga akhrisan jiray kutubtan ay mamnuucday dawlada Ruushku.
Sawirro: Fanaanad caan ah oo anshax xumo ku dhex sameysay Masjid..!